कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले चाल्यो यस्तो महत्वपूर्ण कदम, आजैबाट देशभर लागु गरिने घोषणा ! [सुचना सहित] – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले चाल्यो यस्तो महत्वपूर्ण कदम, आजैबाट देशभर लागु गरिने घोषणा ! [सुचना सहित]
कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले चाल्यो यस्तो महत्वपूर्ण कदम, आजैबाट देशभर लागु गरिने घोषणा ! [सुचना सहित]
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा रहेका अस्पतालसँग समन्वय गरी कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्नका लागि समिति गठन गरेका हुन् ।मन्त्रालय वा विभागको ११ औं तहका कर्मचारीको संयोकत्वमा राष्ट्रिय स्वस्थ्य तालिम केन्द्रका शाखा अधिकृत र मन्त्रालयकै जनस्वास्थ्य अधिकृत सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।
समितिले प्रदेशमा कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रण गर्न आइपर्ने समस्यालाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीयतहसँग समन्वय गर्ने र कोभिड–१९ बाहेकको अन्य नियमिति सेवा प्रवाह गर्न समन्वय गर्नेछ । नाकाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई अनिवार्यरुपमा मापदण्डअनुसार क्यारन्टिनमा राख्ने छ !
नेपाल प्रवेश गर्ने नाकाबाट प्रवेश गर्ने व्यक्तिलाई अनिवार्यरुपमा मापदण्डअनुसार क्यारन्टिन र होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र अनिवार्य रुपमा पिसिआर परीक्षणको व्यवस्थाको समन्वय गर्नेछ ।